How'd it happen and more reports?: ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း Yangon Stock Exchange (YSX)
ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း Yangon Stock Exchange (YSX)
ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း (YSX) ကို နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေ ဝင်လာတော့မလား
မကြာသေးခင်အထိ အာရှမှာ မြန်မာဟာ စတော့အိပ်ချိန်းမရှိသေးတဲ့ အကြီးဆုံး စီးပွားရေးနိုင်ငံတခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း (YSX) ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ အချိန်က စပြီး ဒီအနေအထားဟာ ပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီ။ အခုဆိုရင် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းမှာ ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်လုပ်တာ ၂ လတင်းတင်း ပြည့်သွားပါပြီ။ မကြာခင်မှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေလည်း ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း (YSX) မှာ ပါဝင်ခွင့်ရကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း (YSX) ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်အချိန်ယူခဲ့ရပြီး အခုချိန်အထိတော့ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးအဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အရင်အစိုးရရဲ့ နောက်ဆုံးပရောဂျက်တခုအနေနဲ့ YSX ကို ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာလမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီအချိန်က အရောင်းအဝယ်လုပ်စရာ စတော့မရှိသေးပါဘူး။
စီးပွားရေး ဘရမ်းဘဒါဖြစ်မှုနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုဒဏ်ကို ၁၀ စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ခါးစည်းခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတော့အိပ်ချိန်းတခု ရှင်သန်နိုင်ပါ့မလားလို့ သံသယရှိသူတွေ မနည်းမနော ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခြေအနေတွေဟာ အကောင်းဖက်ကို ဦးတည်နေဟန် ရှိပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ YSX မှာ တရားဝင်စာရင်းသွင်းထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ ၂ ခု ရှိနေပြီး လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာ နောက်ထပ် ၄ ခု ထပ်တိုးလာဖို့ ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ပိုင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (MEB) ရဲ့ အဓိကရှယ်ယာပိုင်ရှင်တွေအပေါ်မှာ ချမှတ်ထားတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကို မေ ၁၇ က ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဟာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အမြောက်အမြား ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် အားကောင်းလာပြီး ရှေ့နှစ်တွေမှာ သန်သန်မြန်မြန် တိုးတက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
နိုင်ငံခြားက ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို YSX မှာ ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်လုပ်ခွင့် ပေးဖို့နဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီတွေကို YSX မှာ စာရင်းသွင်းခွင့်ပြုဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ မြန်မာ့ Securities and Exchange Commission က ဇွန် ၁ မှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
စတော့ဈေးကွက်ဟာ မြန်မာပြည်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အရင်း (capital) စီးဝင်ရာနေရာတခု၊ ကုမ္ပဏီတွေအတွက် ငွေကြေးရှာဖွေနိုင်တဲ့ လမ်းသစ်တခု ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ လေလေဆယ်မှာ မြန်မာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းဟာ အားပျော့နေပြီး ဒီထက်မက ဖွံ့ဖြိုးဖို့ လိုနေဆဲပါ။ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့ အဓိက အဟန့်အတားဟာ ငွေပင်ငွေရင်းကို လက်လှမ်းမမီတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆိုပါတယ်။ လုပ်ငန်းစုစုပေါင်းရဲ့ ၃% ကပဲ ဘဏ်ချေးငွေကို ရယူနိုင်ကြတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းအများစုဟာ ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုသာ အားပြုရတဲ့ မိသားစုပိုင်လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့ စတော့အိပ်ချိန်းတခုဟာ မြန်မာ့အရင်းဈေးကွက် (capital markets) ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အရေးမှာ ပထမခြေလှမ်း ဖြစ်တဲ့အပြင် မြန်မာ့လူလတ်တန်းစားနဲ့ အပေါ်ယံလွှာကို အစဉ်အလာအားဖြင့် အားသန်ခဲ့တဲ့ အိမ်ခြံမြေလို ဒြပ်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုတွေထက် သွက်လက်တဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို ပိုစိတ်ပါလာအောင် ဆွဲဆောင်ပေးမှာပါ။ YSX က စီစဉ်တဲ့ ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်ဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်းတွေကို လူကြိုက်များတာဟာ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတခုပါ။
YSX ကို အဓိက အထောက်အကူပြုနေတဲ့ အချက်က အတတ်ပညာရော၊ ငွေရင်းရော သယ်ဆောင်လာပေးတဲ့ ဂျပန်တွေရဲ့ ရေရှည် ပါဝင်ပတ်သက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Daiwa Institute of Research ကသာ ဇွဲမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် YSX ဆိုတာ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုလောလောဆယ်မှာ စတော့ဈေးကွက်ရဲ့ ရှယ်ယာရဲ့ ၃၀.၂၅% ကို Daiwa Institute of Research က ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၊ ၁၈.၇၅% ကို Japan Exchange Group က ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
မြန်မာ့စတော့ဈေးကွက်မှာ Daiwa ရဲ့ ပါဝင်မှုဟာ ၁၉၉၅ ကတည်းက စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က Daiwa ဟာ မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်နဲ့အတူ over the counter (OTC) ရှယ်ယာဈေးကွက်ကို ထူထောင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် OTC ဈေးကွက်မှာ ရှယ်ယာရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီက ၂ ခုထက် မပိုခဲ့ပါဘူး။ "အဲဒီပရောဂျက်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စတော့အိပ်ချိန်းအသွင်ကို ပြောင်းယူသွားဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီပရောဂျက်ဟာ ၁၉၉၇ အာရှဘဏ္ဍာရေး အကြပ်အတည်းနဲ့ ၂၀၀၃ မြန်မာဘဏ်လုပ်ငန်း အကြပ်အတည်းတွေကြောင့် ၂ ကြိမ်တိတိ တုန့်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်" လို့ တာကာဟီရိုမာဆူတိုမိုက ရှင်းပြပါတယ်။ သူက လီကွမ်ယု ပြည်သူ့မူဝါဒ တက္ကသိုလ်ရှိ အာရှနဲ့ ဂလိုဘယ်လ်လိုက်ဇေးရှင်း စင်တာက သုတေသီတဦးဖြစ်ပါတယ်။ "ဦးသိန်းစိန်အာဏာရလာတဲ့ ၂၀၁၁ နောက်ပိုင်းမှာမှ YSX ထူထောင်ရေးကိစ္စကို စပြီး အလေးထား စဉ်းစားလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်" လို့ မတ်ဆူမိုတိုက ရှင်းပြပါတယ်။ အခုချိန်အထိတော့ မြန်မာပြည်မှာ ပြောပလောက်စရာ စတော့ဈေးကွက် အခြေခံအဆောက်အဦးတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ဒိုင်ဝါဟာ ဂျပန်အိပ်ချိန်းဂရုပ်ကို အကျိုးတူလုပ်ငန်းဖက်အနေနဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းကို ခေါ်သွင်းလာတာပါ။ တပြိုင်ထဲမှာ ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနကို စတော့အိပ်ချိန်းတခု ထူထောင်ရာမှာ လိုအပ်မယ့် ဥပဒေအသစ်တခု ကူညီရေးဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်။ မတ်ဆူမိုတိုရဲ့ အပြောအရဂျပန်အိပ်ချိန်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲ ဝင်လာရတဲ့ အကြောင်းတခုဟာ အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာ ကိုးရီယားစတော့အိပ်ချိန်းထက် နောက်ကျနေတာကို မလိုလားလို့ပါ။ ကိုးရီယားစတော့အိပ်ချိန်းဟာ လာအိုနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား စတော့အိပ်ချိန်းတွေကို ကူညီထူထောင်ပေးခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာ ရှိနေတဲ့ လာအိုနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား အိပ်ချိန်းတွေရဲ့ အနေအထားဟာ YSX ရဲ့ရှေ့ရေးကို သတိပေးနေပါတယ်။ ဒီအိမ်နီးချင်း ၂ နိုင်ငံရဲ့ အိပ်ချိန်းတွေဟာ ဖွင့်ခါစမှာ ချိးမွမ်းမှုကိုရခဲ့ပေမယ့် ထင်ထားသလို မဖွံ့ဖြိုးခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာ့အိပ်ချိန်းလည်း ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပဲလို့ ထင်တဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ အခုချိန်အထိ လာအိုနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား အိပ်ချိန်းတွေမှာ စာရင်းဝင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီအရေအတွက်ဟာ ၄ ခုစီထက် မပိုပါဘူး။
အလွတ် သုတေသီတဦးဖြစ်သူ Northern Illinois University က PhD ကျောင်းသား T.F. Rhoden ကတော့ မြန်မာ့လူဦးရေဟာ ၅၄ သန်းရှိတဲ့အတွက် လာအိုနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ့်အစား ဗီယက်နမ်နဲ့သာ နှိုင်းယှဉ်သင့်တယ်လို့ ထောက်ပြပါတယ်။ တိုင်းပြည်လူဦးရေ များရင် စတော့ခ်ဈေးကွက်မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူလည်း ပိုများနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒေါ်လာ ၆၄ ဘီလီယံခန့်ရှိတဲ့ မြန်မားစီးပွားရေး အရွယ်အစားဟာ လာအို၊ ကမ္ဘောတို့ထက် သုံးဆလောက် ကြီးပါတယ်။
လာအိုနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား အိပ်ချိန်းထံက ယူရမယ့် တကယ့်သင်ခန်းစာက စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီတွေကို သတင်းထုတ်ပြန်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် မလိုက်နာစေခဲ့တဲ့အတွက် အိပ်ချိန်းအပေါ်မှာ ရင်းနှိးမြုပ်နှံသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ အာရှမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထွန်းသစ်စဈေးကွက်တွေအတွက် စားရင်းကိုင်နဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေဟာ အရင်ကထက် ပိုအရေးပါလာပါတယ်။
ရန်ကုန်စတော့ခ်အိပ်ချိန်း (YSX) ဟာ စာရင်းဝင်ဖို့ လျှောက်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာရေး အရာရှိ (compliance officer) ခန့်ထားစေခြင်း၊ အတွင်းသတင်းပေါ် မူတည်ပြီး အတွင်းလူတွေ ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်လုပ်တာကို တားမြစ်တဲ့စနစ် တည်ဆောက်စေခြင်းတွေနဲ့ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ စံချိန်စံနှုန်းကို မြှင့်တင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်းဈေးကွက် (capital market) အတွက် တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ မရှိသေးတဲ့အတွက် ဒီလောက်နဲ့ မလုံလောက်သေးပါဘူး။
"YSX မှာ စာရင်းဝင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ ၂ ခုကတော့ စနစ်ကျတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပြီး နာမည်ကောင်းလည်း ရှိကြပါတယ်" လို့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် စီးပွားရေးအကြံပေးလုပ်ငန်းတခုဖြစ်တဲ့ Frontier Myanmar က သုတေသန မန်နေဂျာ ဂျယ်ရမီမူလင်းစ်က ပြောပါတယ်။ "အနာဂတ်ကို မျှော်ကြည့်ရင်၊ နာမည်ကောင်း ပိုရှိတဲ့ မြန်မာကုမ္ပဏီတွေကို YSX ကို လာအောင် ဆွဲခေါ်ဖို့ကိစ္စက အများကြီး ပိုခက်ခဲမှာပါ" လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
လေကြောင်းလိုင်းကနေ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအထိ လုပ်ငန်းမျိုးစုံ လုပ်ကိုင်တဲ့ FMI ကုမ္ပဏီဟာ မတ်လ ၂၅ မှာ YSX ရဲ့ ပထမဆုံး စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာပါတယ်။ FMI တည်ထောင်သူ ပြည်တွင်းအခြေစိုက် ဆာ့ရ်ှပန်းရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကြောင့် FMI ရှယ်ယာတွေကို လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ ဆာ့ရ်ှပန်းဟာ စင်္ကာပူ စတော့ခ်အိပ်ချိန်းမှာလည်း သူ့ကုမ္ပဏီကို စာရင်းဝင်ထားပါတယ်။ YSX ရဲ့ ဒုတိယ စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဟာ မေလ ၂၀ မှာ ရှယ်ယာတွေကို အများပြည်သူထံ ပထမအကြိမ် စတင်ရောင်းချပါတယ် (IPO) ။ ဒီကုမ္ပဏီဟာ ဂျပန်ဖက်စပ်လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစတော့ခ် ၂ ခုစလုံးဟာ YSX မှာ စာရင်းဝင်တဲ့အချိန်က စပြီး အတက်အကျ ကြမ်းလှပါတယ်။ ဈေးက ၂ ဆအထိ တက်သွားပြီးမှ ကနဦးရောင်းဈေး (IPO price) အောက်ကို ပြန်ကျပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ စတော့ခ်ဈေးကွက် အသစ်စက်စက်အပေါ်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားတာအပြင် တမင်ကို ဈေးတက်စေချင်လို့ အိပ်ချိန်းအပြင်က ဈေးကွက် (OTC) ပေါက်ဈေးထက် ချရောင်းထားလို့များလားလို့ စိုးရိမ်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဇူလိုင်လမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်ကလည်း YSX မှာ စာရင်းဝင်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။
သီအိုရီအရကတော့ ကုမ္ပဏီတွေ တခုပြီးတခု YSX ကို ရောက်လာရမှာပါ။ မကြာမီက ခန့်မှန်းချက်အရ အိပ်ချိန်းအပြင်ဖက်က OTC ဈေးကွက်မှာ ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ခွင့် ရထားတဲ့ အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ၂၀၀ ကျော် ရှိနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် Rhoden ရဲ့ အပြောအရကတော့ ဒီကုမ္ပဏီအများစုဟာ အစိုးရ ကန်ထရိုက်တွေကို ရချင်လို့သာ အများပိုင်ကုမ္ပဏီ အသွင်ဆောင်ထားကြတာပါ။ "ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာ မတည်ငွေ သိန်း ၅၀၀၀ ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကလွဲရင် အများပိုင်ကုမ္ပဏီတခု ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်ဖို့ တခြားဘာတွေကို လိုပ်နာလုပ်ကိုင်ရမယ်ဆိုတာကို ဂဃနဏ မသိကြပါဘူး" လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။ ဒီလိုအများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေထက် စီးပွားရေးအရ အောင်မြင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကသာ စတော့ခ်အိပ်ချိန်းမှာ ပိုအောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို လေ့လာသုံးသပ်သူတွေက ဆိုကြပါတယ်။ YSX အနေနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ YSX ကို ဘယ်တော့ ဝင်လာမလဲဆိုတာကတော့ ၁၉၄၇ မြန်မာကုမ္ပဏီ အက်ဥပဒေကို ဘယ်တော့ပြင်နိုင်မလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားတွေမှာ ရှယ်ယာပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ မြန်မာ့ အာမခံစာချုပ်များနဲ့ အိပ်ချိန်းများ ကော်မရှင် (SEC) ကတော့ ဒီဥပဒေကို ၁ နှစ်အတွင်းမှာ ပြင်မယ်လို့ ဂတိပေးထားပါတယ်။
"နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို ဝင်ခွင့်ပေးတာဟာ စတော့ခ်ဈေးကွက် ကြီးထွားဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စကို မှန်မှန်ကန်ကန် ကိုင်တွယ်မှတော့ ဖြစ်မယ်" လို့ မူလင်းစ်က ဆိုပါတယ်။ "အကောင်းဆုံးအနေအထားကတော့ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ ပြည်ပက တတ်ကျွမ်းမှုနဲ့ အရင်းအနှီးကို ရရမှာ ဖြစ်သလို ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ အာရှရဲ့ တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံး စီးပွားရေးနယ်ပယ်တခုကို ဝင်ကစားနိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတခု ရရမှာပါ" လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
စတော့ခ်ဈေးကွက်ဟာ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု (FDI) နည်းလမ်းထက် ပြည်ပငွေရင်းတွေ ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ စီးဝင်နိုင်တဲ့ လမ်းကြာင်းတခုအဖြစ်နဲ့ အသုံးတော်ခံနိုင်ပြီး၊ အခုချိန်အထိ တဦးချင်း အသေးစား ရှယ်ယာဝယ်သူတွေသာ ရှိသေးတဲ့ YSX ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသိုင်းအဝိုင်းကိုလည်း ကျယ်ပြန့်စေနိုင်ပါတယ်။
"အောင်မြင်မလား ဆိုတာကိုတော့ ကျိန်းသေမပြောနိုင်သေးဘူး။ YSX မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီတွေ တိုးပွားလာရဦးမှာ ဖြစ်သလို YSX အနေနဲ့ ကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြပြီးမှသာ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေဟာ စတော့ဈေးကွက်မှာ သိသိသာသာ ပါဝင်လာကြမှာပါ" လို့ မူလင်းစ် (Mullins) က ပြောပါတယ်။
Ref: Myanmar's Stock Exchange: Open For Business And Soon To Foreign Investors, by Fanny Potkin, Forbes website Credit: WnABizFin~ Mahar Yangon Securitie
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ စတော့အိတ်ချိန်း မရှိတဲ့ နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံသာ ကျန်ရှိတော့တဲ့ အခြေအနေက ရုန်းထွက်လာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းဟာ စတင်ရောင်းချတဲ့နေ့မှာပဲ ကျပ်သုံးဘီလျံကျော်အထိ ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ အနေအထားနဲ့
၁၉၉၅- ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်က အစပြုခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ခန့်အကြာ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အိပ်မက်စီမံကိန်း အဖြစ်ကနေ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု မပြုနိုင်သေးသော ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းအဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်မှာ နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းမှာဆိုရင် ရှယ်ယာရောင်းချမယ့် ကုမ္ပဏီတွေအဖြစ် First Myanmar Investment, First Private Bank၊ Myanmar Citizen Bank, Myanmar Thilawa SEZ Holdings public Co,Ltd၊ Great HOR KHAN Public Co.LtdeJY Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းဟာ လွယ်လင့်တကူ ပေါ်ထွက်မလာနိုင်ဘဲ အနှစ် ၂၀ ကျော် ကြာခဲ့သော်လည်း လက်ရှိဖွင့်လှစ်ချိန်အထိ နည်းဥပဒေများ အားနည်းမှု၊ စတော့အိတ်ချိန်းမှာ ပါဝင်မယ့် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ရှယ်ယာတွေ စတင်ရောင်းချရန် အသင့်မဖြစ်သေးမှု၊ စတော့အိတ်ချိန်းကို ကြီးကြပ်မယ့် မြန်မာ့ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ်များ ရောင်းဝယ်ရေး ကြီးကြပ်မှု ကော်မရှင်ဟာ အစိုးရက ခန့်အပ်ထားသူတွေသာ ပါဝင်နေမှု၊ အများပိုင် ကုမ္ပဏီများ၏ ဥပဒေနှင့်မညီသော ရှယ်ယာရောင်းချမှုများကို ထိန်းကျောင်းအရေးယူနိုင်မှု အားနည်းနေမှုစတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ငွေမည်းခ၀ါချမှုတွေ ကြုံလာနိုင်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေတယ်လို့ ဝေဖန်မှုတွေ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းကို ဂျပန်-မြန်မာဖက်စပ် တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုမတည် ရင်းနှီးငွေဟာ ကျပ်ဘီလျံ ၁၀၀ ဆိုပေမယ့် ထည့်ဝင်ရင်းနှီးငွေကကျပ် ၃၂ ဘီလျံသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ရန်ကုန် စတော့အိတ်ချိန်းကို မြန်မာနိုင်ငံဘက်က မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်က အစုရှယ်ယာ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ Daiwa Institute of Research နဲ့ Japan Exchange Group တို့က ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ ဒီနေရာမှာလည်း ဝေဖန်မှုက ဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ခံနေရတဲ့ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်ဖြစ်လို့ ရန်ကုန် စတော့အိတ်ချိန်းဟာ အလိုအလျောက်ကိုပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ခံလိုက်ရလို့ပါ။
ရှယ်ယာစရောင်းတဲ့ FMI နဲ့ ဈေးအမြင့်နဲ့ ၀ယ်ထားတဲ့ ရှယ်ယာရှင်တွေ အရှုံးပေါ်မှာလား ?
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းရဲ့ ရှယ်ယာ အရောင်းအ၀ယ်ကို ရုံးဖွင့်ရက်တွေမှာ နေ့စဉ်နံနက် ၁၁ နာရီ တစ်ကြိမ် ၊ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတစ်ကြိမ်နဲ့ နှစ်ကြိမ်သာ ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းမှာ ရှယ်ယာ စတင်ရောင်းချတဲ့ FMI ကုမ္ပဏီဟာ လက်ရှိမှာ အစုရှယ်ယာရှင်ပေါင်း ၆,၇၀၀ ကျော်ရှိပြီး ဈေးကွက်မတည်ငွေဟာ ကျပ်သန်း ၇၂၇,၈၈၀ ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စတော့ဈေးကွက်မှာ ပထမဆုံး စတော့ရှယ်ယာ ရောင်းချခွင့်ရ FMI ကုမ္ပဏီဟာ စတင်ရောင်းချတဲ့နေ့မှာ ရှယ်ယာတစ်စုကို ကျပ် ၂၆၀၀၀ နဲ့ ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီး အမှန်တကယ် ရောင်းချရာမှာတော့ ကျပ် သုံးသောင်း တစ်ထောင်နဲ့ ရှယ်ယာ အစုပေါင်း တစ်သိန်းတစ်သောင်းကျော် ငွေပမာဏအားဖြင့် ကျပ်သုံး ဘီလျံကျော်နဲ့ မတ် ၂၅ ရက်မှာ အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တကယ်ဆို မတ် ၂၅ ရက် မတိုင်မီမှာ FMI ရဲ့ ရှယ်ယာတစ်စုဟာ ကျပ်လေးသောင်းဝန်းကျင် ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီး တကယ်အဖွင့် ဈေးမှာတော့ ကျပ် ၂၆၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး တကယ်ရောင်းချရမှုမှာတော့ ကျပ် ၃၁၀၀၀ သာဖြစ်တဲ့အတွက် စတော့အိတ်ချိန်းမှာ အမြတ်များများ ရမယ်ထင်ပြီး ကြိုဝယ်ထားသူတွေ အတွက်တော့ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ခဲ့ပါဘူး။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ FMI ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ယာတွေ ရောင်းချအပြီး ဧပြီလမှာ စပြီးရောင်းချမှာကတော့ သီလ၀ါ ရှယ်ယာတွေပါ။ ဒီနေရာမှာ မြတ်မယ်ထင်ပြီး သီလ၀ါ ရှယ်ယာဝယ်ယူလိုသူတွေ အနေနဲ့ သတိပြုသင့်တာက ကျပ်တစ်သောင်းနဲ့ ရောင်းခဲ့တဲ့ သီလ၀ါ ရှယ်ယာတွေဟာ အခုဆို ရှယ်ယာတစ်စုကို ကျပ် ၉၀၀၀၀ ၀န်းကျင် ပေါက်ဈေး ရှိနေတာပါ။ ဒီလို ကျပ် ၉၀၀၀၀ ၀န်းကျင် ပေါက်ဈေးရှိနေပေမယ့် ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းမှာ သီလ၀ါရှယ်ယာတွေ တင်ရောင်းရင်တော့ ကျပ် ၉၀၀၀၀ ၀န်းကျင်ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မြတ်မယ်အထင်နဲ့ ရှယ်ယာတွေ ၀ယ်သူတွေကတော့ သတိပြုဖို့လိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းကို ကြီးကြပ်မယ့် မြန်မာ့ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ်များ ရောင်းဝယ်ရေး ကြီးကြပ်မှု ကော်မရှင် အနေနဲ့လည်း အစုရှယ်ယာဈေး ဆွဲတင်ချင်လို့ ကုမ္ပဏီ အချင်းချင်းအကြား ၀ယ်ယူမှုတွေနဲ့ ငွေမည်းခ၀ါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်တွေကို စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
Credit: Eleven Daily News
ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းတွင် ၀န်ဆောင်မှုပေးမည့် ကုမ္ပဏီများစတင်ခေါ်
ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းအတွက် ရှယ်ယာ ရောင်းဝယ်မှုများ လုပ်ရာတွင် ကြားခံ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိုင်လုိုသည့် ကုမ္ပဏီများကုို ဇန်န၀ါရီ ၁၉ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ လျှောက်လွှာများ ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ မောင်မောင်လေးက ပြောသည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၁၀ ရက်နေ့က မြန်မာနုိုင်ငံကုန်သည်ကြီးများနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်တွင် ပြုလုပ်သည့် ရန်ကုန် စတော့အိတ်ချိန်းနှင့် အလုပ်အကုိုင် အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း ဟောပြောပွဲတွင် ၎င်းက အထက်ပါအတုိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းက “၀န်ဆောင်မှု ပံ့ပုိုးပေးရမယ့် ကုမဏီ အမျိုးအစား ၄ မျိုးအတွက် လုိုင်စင် စတင်ခေါ်ယူသွားပါမယ်” ဟု ပြောသည်။
စတော့အိတ်ချိန်း စတင်လျှင် စတင်လုပ်ကုိုင်နုိုင်မည် ဖြစ်သော အဆုိုပါ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အမျိုးအစား ၄ မျိုးအတွက် လျှောက်လွှာကုို ဇန်န၀ါရီ ၁၉ ရက်နေ့တွင် စတင်ရောင်းချ ခေါ်ယူပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် လျှောက်လွှာများ ပိတ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆုိုပါ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ၄ မျိုးမှာ Underwriter ဟုခေါ်သည့် စတော့အိတ်ချိန်းတွင် ပါဝင်သော အများပုိုင် ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ ရောင်းချလုိုသော အစုရှယ်ယာပမာဏကုို တာဝန်ယူဖြန့်ပေးသည့် ကုမဏီများ၊ Dealer ဟုခေါ်သည့် ၀ယ်ရောင်း ၂ ခု စလုံးလုပ်ကုိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများ၊ Broker ဟုခေါ်သည့် ပွဲစား ကုမ္ပဏီများနှင့် Consultant အကြံပေးကုမ္ပဏီများတုို့ ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းကုို ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလ မတုိုင်ခင် ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်နေပြီး စတော့အိတ်ချိန်း စတင်သည်နှင့် ၎င်းကုမ္ပဏီများလည်း လုပ်ငန်းများ စတင် လုပ်ကုိုင်နုိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
ယင်းကုမ္ပဏီ အမျိုးအစား ၄ မျိုးအတွက် လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူရာတွင် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမတည်ငွေ သတ်မှတ်ထားပြီး Underwriter ကုမ္ပဏီအဖြစ် လျှောက်ပါက မတည်ငွေကျပ် ၁၅ ဘီလီယံ၊ Dealer ကုမ္ပဏီဆုိုပါက ၁၀ ဘီလီယံကျပ်၊ Broker ကုမ္ပဏီဆုိုပါက ၇ ဘီလီယံကျပ်နှင့် အကြံပေးကုမ္ပဏီများအတွက် ကျပ်သန်း ၃၀ သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ကုမ္ပဏီလုပ်လုိုသူများအတွက် လျှောက်လွှာဖောင်ကုို စီဒီပြားဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီအသစ် မှတ်ပုံတင်ပြီးမှသာ လျှောက်ထားနုိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင် ကုမ္ပဏီအဟောင်း အမည်များဖြင့် လျှောက်ထား၍ ရမည် မဟုတ်ကြောင်း ဒေါက်တာ မောင်မောင်လေးက ပြောသည်။
၎င်းက “လျှောက်မယ့် ကုမ္ပဏီဟာ အရင်ကုမ္ပဏီ ရှိပြီးသား ကုမ္ပဏီနဲ့ လျှောက်လို့မရဘူး။ Security exchange ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ သတ်သတ်ထောင်ရမယ်။ DICA (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန) မှာ မှတ်ပုံတင်၊ ဒါကုို ကျနော်တို့က သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတယ်ဆိုမှ လုိုင်စင်ချပေးမှာ” ဟု ပြောသည်။
လျှောက်ထားသော ကုမ္ပဏီများအတွက် လုိုင်စင်ကုို ဧပြီလအတွင်း ချပေးသွားရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းလုပ်ငန်းများကုို လုပ်ကုိုင်ကြမည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် နုိုင်ငံခြား ဖက်စပ်လုပ်ပုိုင်ခွင့်ပါ ပေးသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာဘက်မှ ရှယ်ယာအများဆုံး ပုိုင်ဆုိုင်မှု ဖြစ်ရမည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနုိုင်ငံတွင် စတော့အိတ်ချိန်းမှာ ပထမဆုံး စတင်ပေါ်ပေါက်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်မည့် ကုမ္ပဏီများမှာ အတွေ့အကြုံ လုိုအပ်ချက်ရှိနေပြီး နုိုင်ငံခြားနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကုိုင်မှု လုိုအပ်ဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း Thura Swiss ကုမဏီအမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဒေါက်တာ အောင်သူရက ပြောသည်။
၎င်းက “မြန်မာပြည်မှာက အဲဒီလို Business ကုို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အရမ်းနည်းနေတော့ ဖက်စပ်လုပ်ဖုို့က လုိုအပ်လိပ်မယ် ထင်တယ်။ JV ဖက်စပ် မဟုတ်ရင်တောင် မြန်မာကုမ္ဗဏီက ထောင်ပြီးတော့ နုိုင်ငံခြားအကြံပေးတွေ ခေါ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုိုပါလိပ်မယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ မြန်မာကုမ္ပဏီတွေက အတွေ့အကြုံ မရှိသေးဘူးလုို့ ပြောလုို့ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုကဲ့သုို့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကုိုင်မည့် ကုမ္ပဏီများ ခေါ်ယူမှုအပြီးတွင် နောက်တဆင့်အဖြစ် Listed ကုမ္ပဏီဟုခေါ်သော စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်၍ ရှယ်ယာများ ရောင်းချနုိုင်မည့် အများပုိုင်ကုမ္ပဏီများအတွက် လုိုအပ်မည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်သွားမည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိတွင် အဆုိုပါ စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်းဝင်မည့် အလားအလာရှိသော အများပုိုင်ကုမ္ပဏီ အရေအတွက်မှာ ၁၀ ခု ၀န်းကျင်သာရှိပြီး အဆုိုပါ ကုမ္ပဏီများအတွင်းမှ ထပ်မံ ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ဒေါက်တာ မောင်မောင်လေးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းကုို မြန်မာ-ဂျပန် ဖက်စပ်တည်ထောင်ထားပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဂျပန် ဒုိုင်ဝါ သုတေသနအဖွဲ့မှ ၃၀ ဒသမ ၂၅ ရာခုိုင်နှုန်းနှင့် တုိုကျိုစတော့အိတ်ချိန်းမှ ၁၈ ဒသမ ၇၅ ရာခုိုင်နှုန်း ထည့်ဝင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
Myanmar Securities Exchange Centre, the over-the-counter predecessor to the Yangon Stock Exchange, has two listed companies. Photo: StaffMyanmar Securities Exchange Centre, the over-the-counter predecessor to the Yangon Stock Exchange, has two listed companies. Photo: Staff
Ref: By Clare Hammond
1. Joining seminars & events
YSX holds many educational programs such as seminars and events and please makearegistration of the activities via Seminar & Events page.
YSX Capital Markets and Capitalism v1.1 by Than Han on Scribd
The Stock and Corporation v1.1 by Than Han on Scribd
To learn basics ofastock market, the best way is to see and feel the market with your own experiences. YSX has prepared followings to meet your interests and is happy to improve our educational activities to meet all of your expectations.
2. Visiting YSX
YSX opens the Ground floor for you during trading hours, from 9:30 am to 1:00 pm, and you can enjoy:
● seeing stock trading situation with large LFD boards
● making inquiries to staff of YSX and securities companies
● reading books stored in YSX library
● having great coffee in the Y’s cafe and shopping at the souvenir shop
3. Getting YSX’s information
You are able to see the basic information about our stock market via this website.
● Overview ofastock trading of the day > Market summary
● Each company’s stock trading of the day > Stock trading data
● Information about listed companies > Company list
● Disclosure documents of listed companies > Disclosure
● Stock trading procedure > Trading procedure
● Company’s listing procedure > Listing procedure
You are also able to get many valuable and timely information via YSX’s official Facebook page.
In accordance with section 42 (a) of the Securities and Exchange Law and section4of the Trading Participant Business Regulations,YSX gave trading qualification to following securities companies.
21-25, Sule Pagoda Road,1st Floor of MEB (Yangon Region Office), Yangon
No.53, Strand Square, Strand Road, Pabedan Township, Yangon
#03-04, Union Financial Center, Corner of Mahabandoola Road & Theinphyu Road, Botahtaung　Township, Yangon
No.416, Corner of Mahabandoola Road & Manabandoola Garden Street, Kyauktada Township, Yangon
#7-6, Union Financial Center, Corner of Mahabandoola Road & Theinphyu Road, Botahtaung Township, Yangon
Amara Investment Securities Co., Ltd.
Room -6E, No.(628-636), River View Condo, Corner of Merchant Road & 29th Street, Pabedan Township, Yangon
FMI မှ အစုရှယ်ယာဖြင့် အရင်းအနှီး စုဆောင်းခဲ့သမျှ ကိန်းဂဏန်းတွေ သိလိုလျှင်
ယခုတင်ဆက်သည့် ပိုင်းခြားသုံးသပ်အချက်အလက် ကဏ္ဍတွင် နာမည်ကြီး အများပိုင်ကုမ္ပဏီ FMI ၏ အစုရှယ်ယာထုတ်ဝေမှု အရေအတွက်နှင့် ပမာဏ စသည့် အချက်အလက်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဂရပ်ပုံများဖြင့် စုစည်းတင်ဆက်ထားပါသည်။ ၂၀၁၀-၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ ၄ နှစ်ကာလ အတွင်း FMI ၏ အစုရှယ်ယာ အခြေအနေများကို သိရှိနားလည်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကုမ္ပဏီမှ စာရင်းထုတ်ပြန်ချက် မပြုလုပ်သေးသဖြင့် ချန်လပ် ထားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် နှင့် သိရသမျှ အချက်တွေကို ထည့်သွင်း တင်ပြထားပါသည်။
FMI ဘယ်လောက် အမြတ်ငွေရခဲ့သလဲ အမြတ်ဝေစုမည်မျှ ခွဲပေးခဲ့သလဲ စာရင်းအရ FMI ရှယ်ယာ ဘယ်လောက်တန်သလဲ သိချင်လျှင်?
မေလ ၁၀ရက်နေ့ ပိုင်းခြားသုံးသပ်အချက်အလက် ကဏ္ဍမှာ FMI ၏ ၄ နှစ်အတွင်း အစုရှယ်ယာ ထုတ်ဝေမှု အရေအတွက်နှင့် အရင်းအနှီး စုဆောင်းမှု ပမာဏ မည်ရွေ့မည်မျှရှိသည်ကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ယခု တင်ဆက်မှုမှာ FMI ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်စဉ် ဝင်ငွေခွန်ဆောင်အပြီး အမြတ်ငွေနှင့် နှစ်အလိုက် အစုရှင်များအား အမြတ်ဝေစုခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပမာဏများကို ဂရပ်ပုံများဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ တင်ပြထားပါသည်။ ၂၀၁၀-၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ကုမ္ပဏီ၏ အမြတ်ရရှိမှုနှင့် အမြတ်ဝေစုခွဲဝေမှု စသည့် အခြေအနေများကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန် အပြီးတွင် FMI ကုမ္ပဏီ၏ ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအနှီး အခြေအနေ အပေါ်တွင် အချက်အလက် သုံးသပ်မှုများကိုလည်း တင်ပြထားပါသည်။ ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကုမ္ပဏီမှ စာရင်းမထုတ်ပြန်သေးသဖြင့် ၄င်းနှစ်ရှိ အခြေအနေများကို ချန်လပ်ထားခဲ့သော်လည်း သိရသမျှ အချက်အလက်တွေဖြင့် ထည့်သွင်း စဉ်းစား ဖော်ပြထားပါသည်။
ပုံ ၁။ ပုံ ၁ တွင် ၂၀၁၀-၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ စ၍ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ထိ FMI ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ အရေအတွက်များကို တွေ့ရပါမည်။ FMI သည် ၂၀၁၁-၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ် အစုရှယ်ယာ အသစ်များ ထပ်မံထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ရှယ်ယာအသစ်များ မထုတ်ခင် နှစ်စတွင်ရှိသည့် ရှယ်ယာအရေအတွက်ကို အပြာနုရောင် အဖြစ် ဂရပ်ဘား အောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ပုံဖော် ထားသည်။ ဘဏ္ဍာနှစ်များတွင် ထပ်မံ ထုတ်ဝေသည့် ရှယ်ယာသစ် အရေအတွက်ကို အပြာရင့်အရောင့် အဖြစ် ဂရပ်ဘား၏ ဒုတိယ နေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။ အစိမ်းနုရောင်မှာ FMI မှ အစုရှယ်ရှင်များအား Bonus အဖြစ် အပိုဆောင်း ထပ်ပေးသည့် အစုရှယ်ယာအရေအတွက် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် FMI သည် ငါးစု တစ်စု One for Five အစီအစဉ်ဖြင့် ၄င်း ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် ရှိသည့် အစုရှယ်ယာတိုင်းကို ၅ စုလျှင် ၁ စု ထုတ်ဝေပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ထို Bonus ရှယ်ယာများကို ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ထုတ်ဝေပေးခဲ့ရာ Bonus ရှယ်ယာ ၂၄၀၅၆၄၁ ကို အစိမ်းနုရောင်ပုံဖြင့် ၂၀၁၃-၁၄ ဂရပ်ဘားတွင် တွေ့ရပါမည်။ အစိမ်းရင့်ရောင် အစက်များမှာ ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်ခုချင်းစီတွင် ကုမ္ပဏီ၌ရှိမည့် စုစုပေါင်း ရှယ်ယာအရေအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် FMI ကုမ္ပဏီသည် One for Ten ဆယ်စု တစ်စု အစီအစဉ်ဖြင့် အဆိုပါဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်ရှိ အစုရှယ်ယာ ၁၀ စု တိုင်းကို ၁ စုစီ ထပ်မံထုတ်ဝေရန် ဆုံးဖြတ် ထားသည်။ သို့သော် ၄င်း Bonus ရှယ်ယာများသည် ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်သာ ထုတ်ဝေမည် ဖြစ်၍ ယခု ဂရပ်ပုံတွင်မပါရှိပါ။ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ထုတ်ဝေမည့် Bonus ရှယ်ယာ အရေအတွက်မှာ ၁၈၄၁၈၄၇ စု ခန့် ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ကို ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ပုံ ၂။ ပုံ ၂ တွင် FMI ကုမ္ပဏီမှ နှစ်စဉ် ထပ်မံ ထုတ်ဝေသည့် ရှယ်ယာသစ်များကို ရောင်းချ ခဲ့သည့် ပျှမ်းမျှနှုန်းထားကို နှစ်အလိုက် ဖော်ပြထားသည်။ ပျှမ်းမျှနှုန်းထားသည် FMI ကုမ္ပဏီမှ ရှယ်ယာတစ်စု ရောင်းချတိုင်း အရင်းအနှီး ပျှမ်းမျှအားဖြင့် မည်မျှ လက်ခံ ရရှိခဲ့သည်ကို ဖော်ပြပါသည်။
ပုံ ၃။ အပြာရောင်ဖြင့် ဖော်ပြထားသည့် ဂရပ်ပုံသည် ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်နှစ်တွင် ရှယ်ယာသစ်များ ရောင်းချမှုမှ ရရှိခဲ့သည် အရင်းအနှီးငွေ ပမာဏဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀-၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရှယ်ယာသစ်များ မထုတ်ဝေခဲ့၍ အပြာရောင် ဂရပ်ဘားကို တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။
အစိမ်းရောင် ဂရပ်ဘားပုံသည် ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်နှစ်စီတွင် အစုရှင်များမှ FMI ကုမ္ပဏီတွင် ထည့်ဝင်ထားသည့် စုစုပေါင်းအစုရှယ်ယာ ထည့်ဝင်မှု အရင်းအနှီး ပမာဏ ဖြစ်ပါသည်။ ရှယ်ယာရောင်းချမှုများမှ စုစုပေါင်း ရရှိထားခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ပမာဏ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် FMI ကုမ္ပဏီတွင် အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်မှု စုစုပေါင်း ကျပ် ၆၈ ဒသမ ၂၁ ဘီလျံကျော် ရှိနေပါပြီ။
FMI တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် သိသင့်သိထိုက်သည့် အချက်အလက်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ရန် အလို့ငှာ စုစည်း မျှဝေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာကို ဝယ်ယူသင့်မသင့် ထောက်ခံခြင်း ကန့်ကွက်ခြင်း ပြုလုပ်သည် မဟုတ်ပဲ သုံးသပ်စမ်းစစ်ရာတွင် လွယ်ကူစေရန် တင်ပြမှုသာဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူရန် အကြံပေးခြင်းလည်း မဟုတ် အချက်အလက် သပ်သပ် သုံးသပ်တင်ဆက်မှု ဖြစ်ပါသည်။
ပုံ ၄။ ပုံ ၄ ရှိ ဂရပ်ပုံတွင် FMI ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်စဉ် အသားတင် အမြတ်ဝင်ငွေ Net Income ကို အစိမ်းနုရောင် ဘားများမှာ တွေ့ရပါမယ်။ ဂရပ်ပုံအရ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကုမ္ပဏီမှ အသားတင်အမြတ် ကျပ် ၃၀၁၁ သန်း ကျော် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အမြတ်ဝေစု ပမာဏ Dividends နှစ်စဉ် ပေးဝေမှုကို အနီဖျော့ရောင် ဘားများဖြင့် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကုမ္ပဏီမှ စုစုပေါင်း အမြတ်ဝေစု ကျပ် ၃၆၈၃ သန်း ကျော် အစုရှယ်ယာရှင်များထံ ခွဲဝေပေးအပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်မှာ ရရှိခဲ့သည့် အမြတ်ဝင်ငွေထက် ကျပ် ၆၇၁ သန်းကျော် ပိုမိုပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီလို အမြတ်ဝေစုကို အသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေထက် ပိုမိုခွဲဝေပေးခြင်းဟာ ကုမ္ပဏီအတွင်း အစုရှင်များ စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်သည့် အရင်းအနှီး Equity ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီမှ ရသည့် အမြတ်က ကျပ် ၃၀၁၁ သန်း သာရှိသော်လည်း ကျပ် ၃၆၈၃ သန်းကျော် အစုရှင်များအား ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်၍ ထိုနှစ်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ အရင်းအနှီးထဲမှ ကျပ် ၆၇၁ သန်းကျော် လျော့နည်းသွားမည်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက ရရှိသည့် အသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေကို အစုရှင်များအား အကုန်လုံးခွဲဝေမပေးပဲ အချို့ကို ချန်လပ်ထားပါက ကုမ္ပဏီ၏ အရင်းအနှီးပမာဏမှာ များပြားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအတိုင်းပဲ ၂၀၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် FMI မှ အမြတ်ငွေ ကျပ် ၁၁၉၈ သန်းကျော် ရရှိခဲ့သော်လည်း ကျပ် ၇၇၄ သန်းကျော်သာ အစုရှင်များအား အမြတ်ဝေစု အဖြစ် ခွဲဝေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ထိုနှစ်တွင် ချန်လပ်ထားခဲ့သည့် အမြတ်ငွေ ကျပ် ၄၂၄ သန်းကျော်ဟာ ကုမ္ပဏီ၏ အရင်းအနှီးကို ပိုမို များပြားလာစေပါတယ်။ ဒီလို အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေမှုပမာဏ အနည်းအများကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ အရင်းအနှီး တိုးပွားမှု လျော့နည်းမှုများကို အစိမ်းရင့်နှင့် အနီရင့် အရောင်ရှိ ဂရပ်ဘားများဖြင့် ဖော်ပြထားပါတယ်။ အစိမ်းရင့်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအနှီး မည်မျှတိုးပွားလာသည်ကို ပြ၍ အနီရင့်မှာ မည်မျှ လျော့နည်းသွားသည်ကို ပြပါတယ်။
ပုံ ၄ ပါ အချက်အလက်များကို သုံးသပ်ခြင်း
ဂရပ်ပုံ ၄ ကို ကြည့်လျှင် FMI ကုမ္ပဏီဟာ လေးနှစ်ကာလမှာ ၂ ကြိမ်ခန့် အမြတ်ဝေစုများကို ကုမ္ပဏီက ရရှိသည့် အမြတ်ဝင်ငွေထက် ပိုမို ခွဲဝေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၀-၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွေမှာ ကုမ္ပဏီမှ အသုံးချနိုင်သည့် အရင်းအနှီးများ ကျပ် ၁၇၄ သန်းကျော် နှင့် ကျပ် ၆၇၁ သန်းကျော် အသီးသီးစီ လျော့ကျခဲ့ရပါတယ်။ ကျန်သည့် နှစ်တွေမှာ အမြတ်ဝင်ငွေဟာ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေမှု ထက် ပိုမိုများပြားခဲ့၍ ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအနှီး Equity တိုးတက်မှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ၄ နှစ်ကာလ အတွင်း စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း ၁၇၁၀ ကျော် လျော့ကျခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလို ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအနှီး လျော့ကျမှုများဟာ အမြတ်ဝင်ငွေထက် ပို၍ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့၍ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေမှုကြောင့် အရင်းအနှီး တိုးပွားလာမှု မရှိသဖြင့် FMI ကုမ္ပဏီဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ထပ်မံလုပ်ရန်ရှိပါက ရှယ်ယာအသစ်များ ရောင်းချခြင်းဖြင့်သာ လိုအပ်သည့် အရင်းအနှီးကို ဖြည့်တင်းသွား ရပါမယ်။ ၄ နှစ်ကာလအတွင်းမှာလည်း ထိုအတိုင်းပဲ FMI ကုမ္ပဏီဟာ ရှယ်ယာအသစ် ရောင်းချမှုများစွာဖြင့် ကျပ် ၅၃ ဘီလျံကျော် ခန့် အရင်းအနှီးစုဆောင်းမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ပုံ ၄ အရ များပြားတဲ့ အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေမှုများကြောင့် FMI ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအနှီး လျော့ကျခဲ့ရကြောင်း FMI ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအနှီးတိုးပွားလာခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ အမြတ်ဝင်ငွေမှ စုဆောင်းမှုများ Retained Earnings ကြောင့် မဟုတ်ပဲ ရှယ်ယာအသစ်များ ထုတ်ဝေ၍ အရင်းအနှီး စုဆောင်းမှုများကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါတယ်။
ပုံ ၅။ ပုံ ၅ မှာ ဂရပ်ပုံနည်းနည်းနှင့် အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက် ကိန်းဂဏန်းအချို့ကို ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ အချက်အလက်တွေဟာ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန် အပြီးရှိ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ ၅ ကို ကြည့်တာနဲ့ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန် အပြီး အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိနိုင်သော်လည်း ပိုမို ပြည့်စုံစေရန် ပုံ ၅ ပါ အချက်အလက်များအကြောင်းကို သုံးသပ်စမ်းစစ်ချက် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
ပုံ ၅ ပါ အချက်အလက်များကို သုံးသပ်ခြင်း
ပုံ ၅ ထိပ်ဆုံးမှာ တွေ့ရမည့် ဘောနပ်စ် ရှယ်ယာ အရေအတွက် ဆိုတာဟာ FMI ကုမ္ပဏီမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လကုန်ရှိ အစုရှယ်ယာ ၁၀ စု တိုင်းကို ၁ စု ဘောနပ်စ်ရှယ်ယာ အဖြစ် ထုတ်ဝေပေးမည့် ရှယ်ယာ အရေအတွက် စုစုပေါင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ၁၀ စု လျှင် ရှယ်ယာ ၁ စု အပိုဆောင်း ထုတ်ဝေပေးရန် One for Ten အစီအစဉ်ကို ကုမ္ပဏီမှ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်အပြီး သြဂုတ်လတွင် ချမှတ်ခဲ့ရာ Bonus ရှယ်ယာ ၁၈၄၁၈၄၇ စု ခန့် အစုရှင်များအား ထုတ်ဝေ ပေးအပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အကုန်တွင် ရှယ်ယာ အစုရေ ၁၈ သန်းကျော်သာ ရှိရာမှ Bonus ရှယ်ယာ ထုတ်ဝေအပြီးမှာ ပုံ ၅ အတိုင်း ၂၀၂၆၀၃၂၅ စုခန့် ရှိနေမည် ဖြစ်ပါတယ်။
အစုရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်း၊ ကုမ္ပဏီမှ အသုံးချနိုင်သည့် အရင်းအနှီး Equity ဟာ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ပေးဝေရမည့် အမြတ်ဝေစု ကျပ် ၃ ဒသမ ၆၈၄ ဘီလျံကျော် ပုံ ၄ ပါအတိုင်း ပေးချေ အပြီးမှာ ကျပ် ၆၈ ဒသမ ၂၄ ဘီလျံကျော် ကျန်ရှိပါမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်တာကာလမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအနှီးဟာ ကျပ် ၁၄ ဘီလျံကျော်သာ ရှိရာမှ ကျပ် ၆၈ ဘီလျံကျော် အထိ တိုးပွားလာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီလို ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်း Equity တိုးပွားလာတာဟာ ပုံ ၄ မှာ ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်း အသားတင် အမြတ်ဝင်ငွေမှ စုဆောင်းမှုများ Retained Earnings ထားရှိခြင်း အမြတ်ဝင်ငွေ အဆမတန် တိုးတက်လာခြင်း တို့ကြောင့် မဟုတ်ပဲ FMI ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာသစ်များ ထပ်မံရောင်းချ၍ အရင်းအနှီး စုဆောင်းမှုများကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကြောင့် ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်း FMI ကုမ္ပဏီမှ ကျပ် ၅၃ ဒသမ ၆၉ ဘီလျံကျော်ဖိုးခန့် ရှယ်ယာ အသစ်များ ထုတ်ဝေပြီး အရင်းအနှီး စုဆောင်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပုံကို ပုံ ၅ မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိုအခြေအနေတွေအရ FMI အစုရှယ်ယာတစ်ခု၏ စာရင်းဇယားအရ ရှိမည့် တန်ဖိုး Book Value ကို တွက်ချက်နိုင်ပါပြီ။ အစုရှယ်ယာတစ်ခု၏ စာရင်းအရတန်ဖိုး Book Value ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ စာရင်းရှင်းတမ်း ထုတ်ပြန်ချက်တွေ စာရင်းဇယားတွေမှာ ရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ တွက်ချက်လျှင် ရရှိမည့် အစုရှယ်ယာတစ်ခု၏ တန်ဖိုးနှုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းအရတန်ဖိုး Book Value ဟာ ရှယ်ယာရဲ့ ပြင်ပ ပေါက်ဈေးနှင့် ကွာခြားနေနိုင်ပါတယ်။ စာရင်းဇယာအရဆိုလျှင် စာရင်းတန်ဖိုး Book Value ဟာ ရှယ်ယာတစ်စု တစ်ကယ်ရှိသင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းတန်ဖိုးပါ။ သို့သော် ကုမ္ပဏီ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမှု မကောင်းမှု အပေါ် မူတည်ပြီး ပြင်ပ ပေါက်ဈေးနှင့် ကွာခြားနေတတ်ပါတယ်။ စာရင်းအရတန်ဖိုးနှင့် ပြင်ပပေါက်ဈေး အဆများစွာ ကွာဟနေလျှင် ရှယ်ယာတစ်ခု၏ ဈေးမြောက်လွန်းနေတယ်လို့ ယေဘူယျအားဖြင့် သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုလျှင် ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် အပြီးတွင် FMI အစုရှယ်ယာ၏ စာရင်းအရတန်ဖိုး Book Value မှာ တစ်စုလျှင် ၃၃၆၈ ကျပ်သာ ရှိပါတယ်။ ပြင်ပ ယခုပေါက်ဈေးမှာ ကျပ် ၁၂၈၀၀ ရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် ရှိနေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် FMI ၏ ရှယ်ယာဈေးနှုန်းဟာ ကုမ္ပဏီ စာရင်းဇယားအရ ရှိမည့် တန်ဖိုးထက် ၃ ဒသမ ၄၅ ဆ သို့မဟုတ် ၃ ဆခွဲ နည်းပါးခန့် ပိုမိုများနေပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုသော် ကုမ္ပဏီမှာ ထည့်ဝင်ပြီးသား ပမာဏ ၃၃၆၈ကျပ် တိုင်းဟာ ပြင်ပ ဈေးကွက်မှာ ရှယ်ယာအဖြစ် ပေါက်နေတဲ့ဈေးနှုန်းအရ ကျပ် ၁၂၈၀၀ခန့်တန်နေခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ယခု အချိန်တွင် အမြတ်ဝင်ငွေမှ စုဆောင်းမှု Retained Earnings သိပ်မရှိပဲ ရှယ်ယာသစ်ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့်သာ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအနှီးများ Equity ရရှိထား၍ FMI ကုမ္ပဏီရှယ်ယာ ပြင်ပဈေးနှုန်းသည် စာရင်းအရ တန်ဖိုးနှုန်းထက် ပိုများနေတယ်ဟု ယေဘူယျအားဖြင့် အချက်အလက်ပိုင်းအရ သုံးသပ် နိုင်ပါတယ်။
အခုသုံးသပ်မှုများဟာ အချက်အလက် စာရင်းဇယားများအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ သိသင့်သိထိုက်သည့် အခြေအနေတစ်ချို့ကို တင်ပြထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းဇယား အချက်အလက်တို့တွင် မပါရှိသည့် ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် စီမံကိန်း စီးပွားရေးတို့မှ ရရှိနိုင်မည့် အနာဂတ် အကျိုးအမြတ်များကို မသိနိုင်၍ ထည့်သွင်း စဉ်းစားထားခြင်းမပါပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ရင်းနှီးရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အချက်အလက်စုံလင်စွာ သိစေရန် ရည်ရွယ်၍ တင်ပြထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ရှယ်ယာ ဝယ်ယူ သင့်မသင့် ထောက်ခံခြင်း ကန့်ကွက်ခြင်း အကြံပြုသည် မဟုတ်ပဲ သုံးသပ်စမ်းစစ်ရာတွင် လွယ်ကူစေရန် တင်ပြမှုသာဖြစ်ပါသည်။ အချက်အလက် သပ်သပ် သုံးသပ်တင်ဆက်မှုသာ ဖြစ်ပါသည်။
*သီလဝါ စက်မှုဇုံ Financial Statement အား လေ့လာခြင်း*
respectively credit # ဆရာ Nyi Nyi Sein
သီလဝါ စက်မှုဇုံရဲ့ Consolidated Income statement ကို ကြည့်ပြီးတော့ အတွေးထဲ ဝင်လာတာကတော့ Interest income - 811,696, 403 ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Note 19 မှာ ဘာပြောထားသလဲ ဆိုတော့ အတိုးရတာတွေဟာ Local Bank က အတိုးတွေ ဖြစ်ပါသတဲ့။ သိန်း ၈ထောင်ကျော် အတိုးက များလှချီလား, လုပ်ငန်းမှာ မသုံးဘဲ ဘဏ်မှာပဲ ထားပြီး အိပ်နေတဲ့ ငွေကို ၇% အတိုးနဲ့ပဲ ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ရင် 1,275,522,919 (သိန်း ၁သောင်း၂ထောင်ကျော်) ဖြစ်နေပြီ..
ဒါနဲ့၂၀၁၅ မှာတုန်းက ရတဲ့ Interest income ကို ကြည့်လိုက်တော့ 1,933,429,789 (သိန်း ၁သောင်းကျော် အတိုးရပါတယ်) ။
မျက်လုံးတွေ ပြူးထွက်ကုန်ပြီး အဲ..အဲ.. ဒါဆိုရင်တော့ ၂၀၁၆ က တော်သေးတယ်။ ၂၀၁၅ မှာ စုထားတဲ့ငွေတွေကို လုပ်ငန်းအတွက် သုံးနေလို့သာ အတိုးနည်းသွားတယ်လို့ ပဲ စိတ်ဖြေသိမ့်လိုက်ရပါတယ်။
နည်းသွားတဲ့ အတိုးရတဲ့ငွေဟာ 1,121,733,386 - သိန်း ၁ သောင်း၁ထောင်ကျော် နည်းသွားတယ်ဆိုတော့ Management ကပဲ YSX အတွက် ထုတ်သုံးနေပြီလားပေါ့ နော်..
Other income ကို မသွားခင် Expense ပိုင်းမှာ Salary and benefit ခေါင်းစဉ်မှာ Key management person တွေရဲ့ salary တွေကို ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ salary နဲ့ ပေါင်းပြထားတာပါပဲ။ Notes 21 မှာတော့ Key management person တွေရဲ့ salary တွေကို ခွဲခြား ဖော်ပြထားပေမဲ့ SOCI မှာ သီးသန့် ခေါင်းစဉ် ခွဲပြရင် ပိုပြီး Transparency ဖြစ်တယ်, reporting standard ကိုလည်း ပိုပြီး compliance ဖြစ်စေတယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
လစာဟာ မနှစ်ကထက် ၂ဆကျော်ကျော် တက်သွားပါတယ်။ သာမန်စဉ်းစားရင်တော့ လစာ ၂ ဆတက်ရင် ဝင်ငွေ၂ ဆ တိုးရမှာပါ။ တစ်ကယ်ဖြစ်သင့်တာက ၃ ချိုး ၁ ချိုး - ၃း၁ ပေါ့။ လစာအတွက် ၁ ချိုး, Cost အတွက် ၁ ချိုး , Profit အတွက် ၁ ချိုး ထည့်ဝင်ရမှာပေါ့။ မနှစ်က ဝင်ငွေနဲ့ ဒီနှစ် ဝင်ငွေ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ၃း၁ သာသာလေးဆိုတော့ မဆိုးပါဘူးပေါ့။
လစာဟာ ၃း၁ ဆိုပေမဲ့ Target နဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ကိုယ့်လစာရဲ့ ၃ ဆထက် ပိုပြီးရှာပေးရတဲ့ ကိစ္စတွေရှိပါတယ်။ ၅ဆ, ၆ဆ အထိရှာပေးရလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲသလို စဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ လစာပေးတာ ပမာဏ များနေတယ်လို့ ထင်မြင်မိတာပေါ့။
Key Management personnel တွေရဲ့လစာကို ကြည့်လိုက်တော့
Salary - 146,988,400 ( 2015 MMK 425,993,438)
Bonus - 324,200,000 (2015 MMK Nil)
Total - 471,198,400 (2015 MMK 425,993,438)
Key Mgt personnel တွေရဲ့ လစာဟာ မနှစ်က နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် တော်တော် နည်းသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ management တွေ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သလား, လူပဲထုတ်လိုက်သလား, လစာများ
လျော့ ယူသလားလို့တောင် ထင်မြင်မိပါတယ်။ အဲ.. ဘောက်ဆူးမှာတော့ မနှစ်က ဘာမှ မရှိပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ သိန်း ၃ထောင်ကျော် ရှိပါတယ်။
Bonus က performance အပေါ်မူတည်ပြီး ယူတယ်ဆိုတော့ performance ကောင်းလာတယ်လို့ ထင်ယောင်မြင်မှား ဖြစ်စေတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ presentation ကို အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ပါတယ်။
မနှစ်က Bonus မယူဘူး .. လစာက သိန်း ၄ထောင်ကျော်, ဒီနှစ်မှာ ဘောနပ်က သိန်း ၃ထောင်ကျော်, လစာက သိန်း ၁ထောင် ကျော်ဆိုတော့ လစာကို လျော့ပြ ဘောနပ်စ်ကို တိုးပြတာ နဲ့ အတူတူပါပဲ။ လှည့်စားလို့ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ (ကုလားကြီး နဲ့ အရာကြီးပေါ့နော်)
Current year Directors' names
Report မှာ Current year အတွက် Director အနေနဲ့ ဘယ်သူတွေက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာလည်း မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါရိုက်တာ အရေအတွက် သိရင် Key Management personnel တွေ salary အရ တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ယူသလဲ အကြမ်းဖျဉ်း မှန်းကြည့်နိုင်တာပေါ့။
Chair နဲ့ MD လက်မှတ်လေးတွေပဲ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ information ရှာကြည့်တော့ ဒါရိုက်တာ ၇ ယောက် ရှိပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ၇ ယောက်အတွက် လစာ သိန်း ၄ထောင် ကျော်ဆိုတော့ ....တစ်ယောက်ကို သိန်း ၆၇၀ အကြမ်းဖျဉ်း ရတယ်လို့ မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။
Report မှာ သီလဝါ ကုမ္မဏီရဲ့ registration number ကို ဖော်ပြထားတာ မရှိပါဘူး။ ပြစ်ချက် ဖြစ်စေပါတယ်။
www.dica.gov.mm မှာတော့ Registration နံပါတ်ဟာ 484/2013-2014 လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နောက်ထပ် ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ ကုမ္မဏီ expiry date ပါ။ ဇူလိုင် (၄) ရက် နေ့စွဲနဲ့ www.dica.gov.mm မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့Expiry Date : 02/05/2016 ဆိုတော့ ကုမ္မဏီက မရှိတော့တာလား? .. Dica ကပဲ update မလုပ်တော့တာလား .. မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် အဆင်ပြေသလိုလေးပဲလားပေါ့နော်....
Entertainment - MMK 311,168 (2015 MMK 217,908,982)
အစားအသောက်, ဧည့်ခံကျွေးမွေး စရိတ် ဟာ မနှစ်ကထက် မဟားတရားကြီးကို လျော့သွားပါတယ်။ သိန်း ၂ထောင်၁ရာ ကျော်ကနေ၃သိန်းကျော်ယုံလေးပဲ ဆိုတော့ သိန်း ၂ထောင်၁ရာကျော် နည်းသွားပါတယ်။ စရိတ်တစ်ခုဟာ အဲလောက်နည်းသွားရင်တော့ သေချာစစ်ရတော့မှာပေါ့။
သီလဝါက လာသမျှ client တွေကို ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ ကိုယ်စား လုပ်ခိုင်းမလား ဆိုတော့ ဒါတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဘာသွားတွေ့လည်း ဆိုတော့ Meeting expenses - 160,349,612 ဆိုတာကြီးကို တွေ့ပါတယ်။ မနှစ်က မရှိဘူး။ ဒီနှစ်ကျမှမိုးကျရွှေကိုယ် ဆိုသလို ရောက်လာတာဆိုတော့ ဒါဟာ Entertaining ကို Meeting expenses အနေနဲ့ ပြလိုက်တာပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
Entertaining ကို လျော့ပြချင်ရင် ဒီစားရိတ်ဟာ Wholly & Exclusively ဖြစ်သလားဆိုတာနဲ့ အရင်တိုင်းရပါမယ်။
- အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရုံးခန်းတည်ရာမြို့ရဲ့ အပြင်ထွက်လို့ စားသောက်စရာဝယ်စားတာလား ? ဒါဆိုရင် subsistence ထဲ ထည့်လို့ရမယ်။
- အလုပ်ချိန်ပြင်ပ-အိုဗာတိုင်ကြောင့် နောက်ကျသွားလို့ အပြင်မှာ ဝယ်စားတာလား , ဒါဆိုရင်လည်း subsistence ထဲ ထည့်လို့ရမယ်။
- Client Entertaining ဆိုရင်တော့ အလုပ်အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် , personal ပဲဖြစ်ဖြစ် Entertaining ပါပဲ။
Entertaining အစား Meeting expenses ဆိုပြီး account title ပြောင်းထည့်လိုက်ပေမဲ့ မနှစ်က မရှိတဲ့ စရိတ် ဒီနှစ်မှ လာရှိနေတာရယ်,
Entertaining မှာ ပမာဏ တော်တော် လျော့သွားပြီး လျော့သွားတဲ့ ပမာဏဟာ Meeting မှာ လာပေါ်နေတာကြောင့် စာရင်းခေါင်းစဉ်ပြောင်းပြတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူပါတယ်။
Entertaining + Meeting expenses total ဟာ 160,660,780 - သိန်း ၁၆၀၀ ကျော်ရှိတာကြောင့် ၂၅% နဲ့ အခွန်တွက်ကြည့်ရင်40.165,195 - သိန်း ၄၀၀ကျော်ဟာ အခွန်အတွက် အလဟာသ ဖြုန်းတီးသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
Entertaining မှာ ပါတွေပါသလဲဆိုတော့ Client ကို အောက်ပါ အချက်တွေနဲ့ ပြုစုတာ ပေးကမ်းတာတွေ ပါပဲ။
- ဟိုတယ် အစရှိတဲ့ နေရာထိုင်ခင်း
- ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဇာတ်ပွဲ၊ ဂီတပွဲ လက်မှတ်
- ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ရှုခြင်း ၊ ဂေါက်ရိုက်ခြင်း
- အပျော်စီးလှေ၊ ရွက်တိုက်လှေ၊ လေယာဉ်ပျံ အသုံးပြုခြင်း
- Entertainment organiser တွေကို ပေးချေမှု
- လုပ်ငန်းရဲ့ ဒါရိုက်တာ - ပါတနာတွေကို အပေါ်ကအချက်တွေ နဲ့ ပြုစုတာ
Meeting expenses မှာ ဒါတွေပါနေရင် tax allowance ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Donation & CSR - MMK 30,970,920 (2015 Nil)
ဒီနှစ်မှာတော့ လှူဒါန်းငွေနဲ့ Corporate Social Responsibility တွေကို စရိတ်အဖြစ် တွေ့ရပါတယ်။
ဝင်ငွေခွန်မှာ လှူဒါန်းငွေဟာ စုစုပေါင်းဝင်ငွေရဲ့၂၅% ကို သက်သာခွင့်ပြုထားတာကြောင့် Donation ကို သတ်သတ် , CSR ကို သတ်သတ် စာရင်းခေါင်းစဉ် တစ်ခုစီ ခွဲခြားပြီး တင်ပြတာဟာ Compliance ကို ပိုပြီး လိုက်နာစေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
CSR ကတော့ တစ်ကယ်ကိုပဲ နိုင်ငံနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် responsible ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်နေပြီလား??
Social Security Benefit စာရင်းခေါင်းစဉ် မရှိခြင်း
ဝန်ထမ်းတွေကို လုပ်ခ လစာ ပေးရာမှာ ဝန်ထမ်းတွေက SSB ပေးတယ်ဆိုရင် အလုပ်ရှင်ကလည်း သူ့ဖက်ကနေ 3% ထပ်မံ ထည့်ဝင်ရပါတယ်။ SSB Employer cost ဟာ SOCI မှာ မရှိသလို Note(21) Other payable မှာလည်း မတွေ့ပါဘူး။
- Commercial Tax, Withholding Tax , PAYE အစရှိတာတွေကိုလည်း Receivable, Payable မှာ မတွေ့ရပါဘူး။
PAYE liability တော့ အနည်းဆုံး ကျန်ရမှာပါ။ မတ်လ ၃၁- လကုန်မှ လစာပေးတာကို အဲ့ဒီ လအတွက် PAYE ကို ကြိုတင်ပေးဆောင်ဖို့ဆိုတာ အလွန်မတန် ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စပါ။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကြောင့်ပဲ CT, WHT ကင်းလွတ်ခွင့် ရထားသလားဆိုတာကတော့ Disclosure Note မှာ မဖော်ပြထားတာကြောင့် မရဘူးလို့ပဲ မှတ်ရမှာပါ။
Note-11 Deposit and prepayments မှာ Advance tax ဆိုပြီး လုံးချထားတော့, ၂၀၁၅ မှာလည်း အဲဒီစရိတ် မရှိတာကြောင့် ကုမ္မဏီဝင်ငွေခွန်အတွက် ကြိုတင်ပေးတဲ့ အခွန်အဖြစ်နဲ့ Advance tax ကို မှတ်ယူပါတယ်။
ဘာလို့ Advance tax လို့ ယူဆသလည်း ဆိုတော့ FS ကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာတဲ့ date ဟာ ဇွန် ၂၈ ရက်ပါ။ Audit Report ကို Sign ထိုးတဲ့ နေ့စွဲဟာလည်း ဇွန် ၂၈ ရက်ပါ။ Audit report ကို Audit partner က လက်မှတ်ထိုးပြီးမှ ပြည်တွင်းခွန်ကို အခွန်စည်းကြပ်ဖို့ တင်ပြရတာဆိုတော့ ၂ ရက်အတွင်း အခွန်ဘယ်လောက်ကျသင့်သလည်း ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Tax figures အမှန် မသိရသေးဘူးပေါ့။
Self-Assessment နဲ့ ကိုယ်တိုင် အခွန်စည်းကြပ်ခွင့် ရထားရင်လည်း Disclosure note မှာ ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။ အခွန်တွက်ချက်မှုဟာ SA ဖြစ်ကြောင်း ဘာညာပေါ့။
**Note M - Income Taxes မှာတော့ current income tax for current period လို့ ဆိုထားပါတယ်*** ဒါဆိုရင်တော့ အပေါ်က ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ income tax ဆိုတာ သေချာပါပြီ..။
Deferred Tax တွက်ချက်မှုမရှိခြင်း
MFRS ကို လိုက်နာတယ်လို့ Disclosure note မှာ ဖော်ပြထားပေမဲ့ လိုက်နာသင့်တဲ့ Deferred tax ကို ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါဘူး။
Subscription - Nil (2015 1,754,800)
၂၀၁၆ မှာ subscription expense မရှိပါ။ ၂၀၁၅ မှာ ပြခဲ့တဲ့ subscription ကာလတိုင်းဟာ မတ် (၃၁)မှာ ကုန်တာ မဖြစ်နိုင်တေ့ာ prepaid / accrued တွေ ရှိနေအုံးမှာပါပဲ။ ဒီနှစ်မှာ မရှိတော့တာ ဘယ်လိုကြောင့်ပါလိမ့်..
Penalty & Fine - Nil (2015 MMK 74,412,604)
မနှစ်က သိန်း ၇၀၀ ကျော် ဒဏ်ကြေးထိထားတဲ့ သီလဝါဟာ ၂၀၁၆ မှာ ဘာဒဏ်ကြေးမှမဆောင်ရတာ တွေ့ရတော့ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ Manager တွေ Compliance တော်တော်လိုက်နာနေကြပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် တစ်ခြား expense ထဲမှာပဲ dissolve ဖြစ်သွားသလား??
Work in Progress - Nil
Note 12 မှာ WIP ဟာ Cost of land and Land developing cost ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပေမဲ့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ရာမှာ တစ်ချို့တစ်ဝက်ပြီးစီးနေတဲ့ (ဝန်ဆောင်မှု - WIP) တွေကို လျစ်လျူရှူထားပါတယ်။
Dividends paid to shareholders - MMK 7,785,830,000 (2015 Nil)
Final dividend paid in respect of the previous financial year of 2,000 kyats per share ဆိုပြီး Note-14 ကို ညွှန်းပါတယ်။ (Statement of Changes in Equity မှာတော့ ၂၀၁၄ အတွက် Dividend ပေးတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။)
Note-14 ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ retained earning ထဲက နှုတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ မနှစ်က Dividends ကို ဒီနှစ်ထဲမှာ လာပေးရင် reference ရှိဖို့လိုပါတယ်။ Dividends ဟာ မနှစ်က proposed လုပ်ထားတာ မရှိဘဲနဲ့ ဒီနှစ်မှာမှ မနှစ်ကအတွက် ပေးတာပါဆိုရင်တော့ Standard ကို follow မလုပ်ရာ ရောက်ပါတယ်။ Dividends ပေးတာနဲ့ Key management personnel တွေကို Related party transactions အရ Dividends ဘယ်လောက်ပေးတယ်ဆိုတာလည်း ဖော်ပြရပါမယ်။
၂၀၁၄ အတွက် dividend ပေးတာဆိုတော့ ၂၀၁၄ FS ကို ပြန်ကြည့်ရပါမယ်။ ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေ လိုက်နာသလားပေါ့နော်..
Note-24 Significant events of the Company မှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီဇင်ဘာ - ၁၈-၂၀၁၅ မှာ ၂၀၁၄ အတွက် dividends ပေးမဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဇွန်လ-၂၈-၂၀၁၆ မှာပဲ ၂၀၁၆ အတွက် ရှယ်ယာတစ်စောင်ကို ၂၅၀၀ ကျပ် ပေးမယ်ဆိုပြီး proposed လုပ်ပါတယ်။
၂၀၁၅ အတွက် ပျောက်နေပါတယ်။ ၂၀၁၅ အတွက် Dividends မရတော့ဘူးပေါ့။ အပေါ်မှာ ပြောသလိုပါပဲ.. ၂၀၁၄ အတွက် ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာမှ dividends ပေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပေမဲ့ ၂၀၁၆ အတွက်ကတော့ FS ပြီးတာနဲ့ တစ်ခါတည်း proposed လုပ်ထားခဲ့တာ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Stock exchange မှာ investors ဆွယ်ဖို့အတွက် ပေးတယ် လို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။
Note-23 Related party transactions
သီလဝါရဲ့ related party ဖြစ်တဲ့ Chairman တစ်ယောက်တည်းရဲ့ transaction ဟာ ၂၀၁၆ မှာ သိန်း ၁သောင်း၁ထောင်ကျော်ရှိပါတယ်။
ဒီလောက် ပမာဏ များပြားတဲ့ငွေကို ယူထားတယ် (transaction ဖြစ်ထားတယ်) ဆိုတော့ ကုမ္မဏီကို အတိုးပေးရမှာပါ။ အတိုးပေးတာလည်း disclosure note မှာ မတွေ့ပါဘူး။ As terms agreed between parties ဆိုပြီးတော့ ပြီးသွားပါတယ်။ ဒီငွေတွေကို တစ်ခြားဖက်မှာ လှည့်သုံးနေရင် ??
Sales and Purchase of Goods and Service ဆိုထားပြီး Transaction တွေဟာ related party ကနေ ကုမ္မဏီကို အကြွေးတင်နေတာလား, ကုမ္မဏီကနေ related party ကို အကြွေးတင်နေတာလား မကွဲပြားပါဘူး။
ဒီထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း analysis ပြရင်တော့ user friendly ပိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စုစုပေါင်းကို ပေါင်းပြထားတာဆိုတော့ ကုမ္မဏီက ရစရာ ရှိတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းပဲ year end မှာ ဒီပမာဏတွေဟာ မရှိတော့ပါဘူး , တစ်နည်းအားဖြင့်Key Management personnel က ကုမ္မဏီကို အကြွေးတင်ခြင်း မရှိပါဘူးလို့ disclose လုပ်ထားတာလည်း မရှိ, Other receivable, Other payable မှာ ရှာတာလည်း မတွေ့တော့ ဒီအကြွေးဟာ မရှိတော့ဘူးလို့ပဲ မှတ်ယူရမလား , ရှိနေသေးတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူရမလားဆိုတာကတော့ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေဆဲပါ။
Office Renovation - MMK 1,316,000
သိန်း ၃၄၀ တန်တဲ့ office တစ်ခုကို Renovation လုပ်ရာမှာ ၁၃ သိန်းသာသာကုန်တာကို addition အနေနဲ့ ပြတာကတော့ Management ရဲ့ Decision ဆိုပေမဲ့ .. သာမန် redecoration လုပ်တာလောက်ကတော့ repairs & renewals ထဲ ထည့်သင့်ပါတယ်။ IAS-16 PPE recognition criteria တွေ ပြည့်စုံလားဆိုတာ သေချာစစ်ရမှာပေါ့နော်.
Deposit & Prepayments
Advances to Suppliers - MMK 1,811,061,446
Supplier ကို ကြိုတင်ပေးထားရတဲ့ငွေဟာ Group အနေနဲ့ သိန်း ၁သောင်း ၈ထောင်ကျော် ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့် ကြိုတင်ပေးထားရတာလဲ? Working capital ကို waste ဖြစ်စေပါတယ်။
နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့ လွယ်လိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ Ratio analysis, Gearing , Dividends yield တွေကတော့ Financial Analyst ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့ Analyst ကျွမ်းတဲ့သူတွေ ပြောကြပါလိမ့်မယ်။
Depreciation - 88,487,845
အံ့သြစရာ ကောင်းတာက Depreciation ဟာ figures မကိုက်ညီပါဘူး။ တစ်နေရာမှာ တစ်မျိုး - နောက်တစ်နေရာမှာ နောက်တစ်မျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်ပဲ မျက်စိ မှားသလားမသိပါဘူး ... :P
Consolidate SCI မှာ 88,487,845
SCI for company မှာ 86,271,262
Consolidate Cash flow မှာ 88,486,846 (တစ်ကျပ်ကွာနေတယ် ကြည့်ရ ရုပ်ဆိုးတာပေါ့နော် :D )
Cashflow for company မှာ 86,271,263 (တစ်ကျပ်ထပ်ကွာပါတယ် :P)
Property & Equipment - net group အနေနဲ့ Total ဟာ 87,051,229 (87,797,397- disposal 746,168) ပါ.. ဘယ်ကထွက်လာပါလိမ့်??
Property & Equipment - Company အနေနဲ့ Total ဟာ 84,834,645 (85,580,813- disposal 746,168) ပါ.. သူလည်း ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ရလာလည်း မသိပါဘူး.. အပေါ်မှာ ပြောတာတွေနဲ့ မတူပါဘူး။
Other income - Profit on Fx Gain MMK 6,082,588,771
Note 20 မှာ ပါတဲ့ Other income analysis မှာ Exchange difference ကြောင့် မြတ်လာတဲ့ အမြတ်ဟာ သိန်း ၆သောင်း ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ Risk ရှိပါတယ်။ ၁၂၁၆ နဲ့ Exchange သင့်ရာကနေ မြတ်ထားတဲ့ အမြတ်ပါ။ ဒီနေ့ လိုမျိုး ၁၁၇၃ exchange rate ဖြစ်နေရင် ၄၃ ကျပ် ရှုံးနေပါပြီ။ Auditor အနေနဲ့ ဒီ Risk ကို ဘယ်လို response လုပ်သင့်သလဲ, Forward contract, hedging တွေ လုပ်သင့်သလား အစရှိသဖြင့် ကုမ္မဏီကို Risk management အတွက် အကြံပေးရပါမယ်။
( Dividend ကို US$ နဲ့ ရတဲ့အတွက် functional currency ကို ပြောင်းလဲရာကနေ ဖြစ်လာတာပါလို့ note မှာ ဆိုပါတယ် )
Posted by Ko Nge at Tuesday, February 21, 2017